Doorashooyinka dawladaha federaalka ee Soomaaliya: Madaxda iyo faragelinta amniga ee doorashooyinka ka horreysa - BBC News Somali
Doorashooyinka dawladaha federaalka ee Soomaaliya: Madaxda iyo faragelinta amniga ee doorashooyinka ka horreysa
Labadan mas'uul doorashooyin ayey wajahayaan
Tallaabooyin ay qaadeen madaxda maamul goboleedyada Koonfur galbeed iyo Puntland ee Soomaaliya ayaa loo arkaa iney u muuqdaan kuwo faragalin noqon kara, oo horseedi kara majara habaabinta doorashooyinka maamulladaas ka dhici doona.
Magaalooyinka Baydhabo iyo Garoowe waxaa si xowli ah uga socda ololaha doorashooyinka madaxda maamul goboleedyada Koonfur galbeed iyo Puntland oo ka tirsan federaalka Soomaaliya.
Waxaa labada magaalaba dhaqdhaqaaqyo ka wada murashaxiinta ku loollami doona kursiga ugu sarreeya, kuwaasoo mid walba uu raadinayo taageero siyaasadeed oo dhinacyada kala duwan ah.
17-ka bisha Nofeembar ee foodda nagu soo haysa ayaa lagu wadaa iney qabsoonto doorashada maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya, halka doorashada Puntland iyana la qorsheeyay iney dhacdo bisha Janaayo ee sannadka soo socda.
Puntland: Codaynta xubnaha Aqalka Sare oo dhamaatay
Hase ahaatee, waxaa hadda soo baxaya warar isa soo taraya oo la xiriira saameynta ay madaxda xilalka haya doonayaan inay ku yeeshaan hannaanka doorashooyinkaas.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray tallaabooyin la xiriira dhinaca amaanka oo ay qaadeen Madaxweynaha Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo dhiggiisa Puntland Dr Cabdiwali Gaas, Xilli ay labadaba ku jiraan olole ay doonayaan in ay dib ugu soo noqdaan.
Labada madaxweyne waxay ka tirsan yihiin madaxda maamul goboleedyada ee isku raacay in xiriirka loo jaro dowladda federaalka.
Xigashada Sawirka, SBC
Taliyihii Ciidanka xasilinta ee Garowe ayaa loo magacaabay taliyaha booliska Puntland in yar ka hor doorashada
Mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee taabanaya hannaanka doorashada iyo natiijada laga filan karo ayaa ah howlaha la xiriira sugidda amaanka.
Si guud marka loo eego, hogaanka maamulka amniga ayaa waxaa khasab ah iney gacanta ku hayaan saraakiil dhex-dhexaad ka ah arrimaha siyaasadda, doorashooyinka iyo hammiga murashaxiinta.
Ololaha doorashooyinka iyo Xorriyadda hadalka
Ololaha doorashada oo horayba u billowday ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysanayay, waxaana ku soo biirayay siyaasiyiin hor leh oo shaacinayay rabitaankooda iyo qorshayaashooda.
Waxaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo si xowli ah uga socday ololaha doorashada, halkaasoo ay isugu tageen siyaasiyiin u sharraxan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed.
Waxaa magaalada ku sugan Suxufiyiin fara badan oo ku howlan soo tabinta dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo u diyaar garowga doorashada.
Sidoo kale, maalintii Axadda, waxaa murashaxnimada xilka madaxweynaha Puntland ku dhawaaqay taliyiha guud ee ciidamada daraawiishta ee Puntland Gen. Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere).
Cabasho ku aaddan xoriyadda hadalka iyo habsami u socodka ol'olaha ayaa soo badanaya.
Weriyeyaal ayaa lagu xiray baydhabo, ayadoo lagu eedeeyey inay ka qayb isu soo bax siyaasadeed
Horraantii usbuucan waxaa magaalada Baydhabo lagu xiray labo wariye oo ka tirsan Warbaahinta SBC iyo telefishinka Dowladda Puntland, in kastoo saacado kooban ka dib la sii daayay.
Wararka ay BBC-da heshay ayaa sheegaya in suxufiyiintaas loo xiray sababo ku saabsan iney tabiyeen isu soo bax ay sameeyeen qaar ka mid ah murashaxiinta doorashada madaxtinnimada loollanka kula jira madaxweyne Sharif Xassan.
Wararku waxay sheegayaan in saxafiyiintaas la sii daayey markii arrintooda la xalliyey, waxaase lagu soo warramay iney wali xiran yihiin dad kale oo ka qeyb galay isu soo baxyadii murashaxiinta, ayna ku jiraan haween.
Arrintaas ayaa si toos ah ugu muuqata mid lagu caburinayo hannaanka siyaasadeed ee ku aaddan doorashada iyo xoriyadda hadalka, sida ay qabaan dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya.
Maxamed Nuurow Isaaq oo ah Falanqeeye siyaasadeed ayaa BBC-da u sheegay in doorashada Maamulka Koonfur galbeed ay hadda si weyn ugu loollamayaan labo dhinac oo kala ah "dowladda federaalka iyo maamulka hadda jira ee koofur galbeed".
"Haddii aan doorasho caddaalad ah la sameynin, oo awood lagu keeno cidda xilka qabaneysa, markaas waxaa meesha ka baxaya kalsoonida ay shacabka ku qabi doonaan maamulka" ayuu yiri.
Wuxuu sidoo kale sheegay in arrintaas ay saameyn ku yeelaneyso nolosha dadweynaha.
"Aragtida shacabka way ka duwan tahay tan siyaasiyiinta, wax taageero ahna lagama helayo haddii lagu caburiyo fikirkooda isla markaana cid aysan raalli ka ahayn maamulka loogu dhiibo".
Xigashada Sawirka, Goobjooge
Jeneraal Siciid Dheere oo madax u ahaa ciidanka adaraawiishta ee POuntland wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay murashax madaxweyne
Jeneraal Siciid Dheere wuxuu murashaxnimadiisa ku dhawaaqay isagoo aan iska casilin xilka taliyaha guud ee ciidamada daraawiishta.
Balse madaxweynaha Puntland Dr Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa durba soo magacaabay saraakiil cusub oo la wareegeysa maamulka ciidamada.
Dr Gaas ayaa taliyaha ciidamada daraawiishta u soo magacaabay S/Guuto Cabdishukri Cabdullaahi Xuseen, halka talyaha ciidamada booliskana uu u magacaabay S/Guuto Muxuyadiin Axmed Muuse.
Labadan sarkaal ayaa xilalka loogu magacaabay wareegto 28-kii bishan Oktoobar, oo ku beegneyd shalay ka soo baxday xafiiska madaxweyne Gaas.
25-kii isla bishan ayuu Dr Cabdiwali Gaas xilalkii ka qaaday saraakil kale oo ka tirsanaa masuuliyiinta laamana amaanka.
Warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale shaqada looga eryey saraakiil sarsare oo ka tirsan laamaha amniga ee Puntland.
Dad badan ayaa tallaabadan u fasirtay isku day ay xukuumadda kula wareegeyso maamulka amaanka, xilli laba bilood ka dib la filayo doorasho.
Khilaafka u dhaxeeya madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaa keenay in kala shaki weyn uu yimaado
Maxamed Nuuroow oo sidoo kale aan wax ka weydiinnay arrimahan ayaa yiri:
"Khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa door weyn ka ciyaaraya faragalin kasta oo lagu sameeyo arrimaha saameynta ku yeelanaya doorashada.
"Tallaabada uu Dr Cabdiwali Gaas qaaday waxaan filayaa iney tahay shaki uu ka qabo in saraakiisha uu xilka ka qaaday ay xiriir dhow la lahaayeen dad ku dhow dowladda federaalka" ayuu yiri.
"Wakhtiga doorashada waxaa jirta xaalad adag oo halis ku noqon karta amniga waxaana loo baahan yahay in si taxadar leh loo wajaho arrimaha" ayuu raaciyey.
Dhanka kale, Cabdifataax Cabdullaahi Maxamed, oo ka tirsan ololaha siyaasadeed ee Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa BBC-da u sheegay in aysan jirin wax astaan ah oo muujineysa inuu Sharif Xasan ku shubto doorashada.
Waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay iney jiraan xiisado siyaasadeed oo ka aloosan magaalada Baydhabo, oo ku saabsan saameynta murashaxiinta iyo faragelin uu sheegay iney dowladda federaalka ku heyso hannaanka doorashada Koonfur galbeed.
"Sharif Xasan awood uma laha inuu ku shubto doorashada mana heysto ciidan laakiin wuxuu aaminsan yahay iney doorashada u dhici doonto si nadiif ah, oo cadaalad ah, laakiin waxaa jirta cabsi laga qabo inuu qalalaase ka dhasho faragalinta dowladda federaalka ay ku heyso arimaha doorashada" ayuu yiri.
Marka laga soo tago wararka la isla dhex marayey, wali dowladda federaalka Soomaaliya kuma aysan dhawaaqin in ay taageereyso musharixiin u taagan madaxtinimada koofur galbeed.
In ka yar seddex todobaad waxaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo ay 13 murashax oo qaarkood hubaysan yihiin ku galaan tartanka madaxweynenimada ee maamulka koofur Galbeed. Waxaa aad isha loogu hayaa in doorashadaas ay noqon doonto mid ay si hufan u dhacda.
Cabashooyin ay BBC kala kulmayso baahintii badnayd ee ay siisay geerida Amiir Philip
Beesha caalamka oo ka digtay cawaaqibka ka dhalan kara ismariwaaga doorashada